कसरी Photoshop CS5 नि: शुल्क र कानूनी रूपमा प्राप्त गर्ने?
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Nepali Blog > कसरी Photoshop CS5 नि: शुल्क र कानूनी रूपमा प्राप्त गर्ने
द्वारा Ann Young, Naveen Pokhrel 2022-01-09, Nepali Blog
मिल्दो: विन्डोज, macOS
थाहा छैन यदि Photoshop CS5 को उपयोग नि: शुल्क बिल्कुल कानूनी छ? त्यसपछि यो पोस्ट पढ्न जानुहोस्। तपाइँ यस कार्यक्रम को बारे मा सबै महत्वपूर्ण जानकारी को खोज हुनेछ। यसबाहेक, तपाइँ Photoshop CS5 नि: शुल्क प्राप्त गर्न को लागी सुरक्षित तरीकाहरु को बारे मा जान्न को लागी र यस कार्यक्रम को लागी धेरै उत्कृष्ट एनालॉगहरु को जाँच गर्नुहुनेछ।
Photoshop CS5 नि: शुल्क लाभ
HDR इमेजिंग अपडेट गरियो
स्वत: लेन्स सुधार
अपडेट गरिएको कच्चा प्रशोधन
XFL फाइलहरु बचाउँछ
उपयोगी गाइड र ग्राहक समर्थन
Photoshop CS5 को मूल्य के हो?
आजीवन लाइसेन्स को लागी, Photoshop CS5 को मूल्य पूर्ण संस्करण को लागी $ 699 र एक अपग्रेड को लागी $ 199 हो। तर तपाइँ पनि एक नि: शुल्क परीक्षण संस्करण को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
नि: शुल्क परीक्षण शर्तहरु
Photoshop CS5 कसरी सुरु गर्ने?
Photoshop CS5 आवेदन फाइल छान्नुहोस्, जुन अनुप्रयोग/Photoshop CS5 फोल्डरमा स्थापित हुनु पर्छ।
३२-बिट र -४-बिट मोडमा Photoshop CS5 कसरी सुरु गर्ने:
Photoshop CS5 बन्द गर्नुहोस्।
कार्यक्रम फाइलहरु मा जानुहोस् (x86) > एडोब > Photoshop CS5 फोल्डर।
Adobe Photoshop CS5.exe फाइलमा डबल क्लिक गर्नुहोस्।
के यो अझै पनी Photoshop CS5 को उपयोग गर्न सम्भव छ?
तपाइँ अझै पनी Photoshop CS5 लाई CS6 मा अपग्रेड गर्ने मौका छ। $ १ non गैर विस्तारित संस्करणहरु को लागी मूल्य हो।
Photoshop CS5 विन्डोज १० संग मिल्दो छ?
हो, Windows 10 मा Adobe Photoshop CS5 स्थापना गर्न-तपाइँ मात्र विन7को लागी कम्प्याटिबिलिटी मोडमा सेटअप फाइल लन्च गर्न आवश्यक छ। फाइल, गुण र gt मा जानुहोस्; अनुकूलता, Win7छान्नुहोस् र सेटअप फाइल डबल क्लिक गर्नुहोस्। मन एडोब आवेदन प्रबन्धक विन 10 मा छैन काम गर्दछ कि
Photoshop CS5 समान निःशुल्क कार्यक्रम छ?
हो, तपाइँ Photoshop को मोबाइल संस्करण Photoshop एक्सप्रेस भनिन्छ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो एन्ड्रोइड र आईओएस स्मार्टफोन को लागी उपलब्ध छ।
Photoshop CS5 नि: शुल्क प्रयोग गर्ने अर्को तरिका
यदि तपाइँ प्राय: द गो मा चित्रहरु सम्पादन गर्दै हुनुहुन्छ, उदाहरण को लागी, एक स्मार्टफोन मा, एक आधिकारिक मोबाइल पीएस संस्करण – एडोब Photoshop एक्सप्रेस तपाइँको लागी एक जरूरी छ। यो नि: शुल्क उपलब्ध छ, रचनात्मक बादल र यसको आफ्नै बादल को उपस्थिति संग एकीकरण समेटेको छ।
लाइसेन्स: नि: शुल्क
डाउनलोड: २३ के
संगत: आईओएस, एन्ड्रोइड
Photoshop एक्सप्रेस लाभ:
उल्लेखनीय तस्वीर कोलाज
RAW फाइलहरु खोल्छ
प्रभाव र फिल्टर को धेरै
सीमा र पाठ थप्न को लागी संभावना
कलंक को आवेदन
Photoshop एक्सप्रेस आईओएस र एन्ड्रोइड संग मिल्दो एक सीमित पी एस संस्करण हो। आवेदन फेसबुक, एडोब आईडी व्यवस्थापन, र3जी डाटा स्थानान्तरण विकल्प संग एकीकरण प्रदान गर्दछ।
आवेदन एक सहज इन्टरफेस को लागी प्रशंसा गरिन्छ र विशेष कौशल को आवश्यकता छैन। तेसैले, यो ग्राफिक डिजाइन र फोटोग्राफी को क्षेत्र मा newbies को लागी ब्याज को हुनेछ। प्लेटफर्म नि: शुल्क छ, जो विशेष गरी व्यक्तिहरु, विद्यार्थीहरु, शुरुवात पेशेवरहरु, स्टार्टअप र साना कम्पनीहरु का कर्मचारीहरु को लागी प्रासंगिक छ।
पाइरेटेड संस्करण Photoshop CS5
त्यहाँ धेरै वेबसाइटहरु छन् कि प्रयोगकर्ताहरु लाई एक मुक्त लाइसेन्स संग एक कार्यक्रम लाई डाउनलोड गर्न को लागी प्रस्ताव छ। मँ यस्तो लिंक मा क्लिक गर्न को लागी र शंकास्पद साइटहरु बाट सफ्टवेयर डाउनलोड गर्न को लागी चेतावनी दिन चाहन्छु। तल, मँ मुख्य कारणहरु तपाइँ यो गर्न सक्नुहुन्न भनेर राज्य जाँदैछु।
यो एक अपराध हो
सायद कसैलाई यो मुद्दा को बारे मा चिन्तित छैन र उनीहरु ह्याक गरिएको सफ्टवेयर को उपयोग लाई लाजमर्दो केहि मान्दैनन्। तर आपराधिक संहिताले अन्यथा सोच्छ।
कसरी सस्तो मूल्य मा Photoshop किन्न पत्ता लगाउनुहोस्।
कुनै टेक समर्थन छैन
यदि तपाइँ "Photoshop CS5 नि: शुल्क डाउनलोड" लि on्कमा क्लिक गरी कार्यक्रम इन्स्टल गरे पछि केहि गलत हुन्छ, तपाइँ यसलाई कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्न, वा त्यहाँ केहि समस्याहरु छन्, तपाइँ यी सबै संग एक्लै छोड्नुभएको छ। किनकि कोहि पनि तपाइँलाई प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्दैनन् - तपाइँ कम्पनी को एक ग्राहक हो कि यो उत्पादन विकसित गरीएको छैन।
यदि तपाइँ एक इजाजतपत्र किन्नुहुन्छ, तपाइँ प्राविधिक सहयोग को माध्यम बाट विकासकर्ताहरु संग कुराकानी गर्न सक्षम हुनुहुनेछ, उनीहरु संग सीधा मुद्दाहरु को एक धेरै समाधान र विशेषज्ञ सल्लाह प्राप्त गर्नुहोस्।
कसरी Photoshop CS6 मुक्त गर्न को लागी हेर्नुहोस्।
अपडेट को अनुपस्थिति
आधिकारिक संस्करण को उपयोग गरेर, तपाइँ तुरुन्तै नवीनतम अपडेट संग आफैलाई प्रदान गर्नुहोस्। Photoshop CS5 संस्करण को उपयोग गरेर, तपाइँ अपडेट को बारे मा बिर्सन सक्नुहुन्छ, तपाइँको व्यक्तिगत डाटा गुमाउने र भाइरस को धेरै डाउनलोड जोखिम।
Photoshop मुक्त अपडेट गर्नुहोस्
Photoshop CS5 नि: शुल्क विकल्प
पीसी को लागी सबै भन्दा राम्रो फोटो सम्पादन सफ्टवेयर बीच सबैभन्दा पेशेवर र शक्तिशाली कार्यक्रम हो। तर तपाइँ धेरै मुक्त एनालॉगहरु पाउन सक्नुहुन्छ।
नि: शुल्क प्रयोग गर्नुहोस्
सम्भावना व्यवस्थापन र तस्वीरहरु संगठित गर्न को लागी
लेन्स र क्यामेरा सुधार
गहन रंग सुधार को लागी उन्नत उपकरण
अनुहार पहिचान र अंकन
कमजोर पीसीहरुमा अस्थिर प्रदर्शन गर्न सक्छ
Lightroom गहिरो रंग सुधार, RAW तस्वीरहरु को संपादन र फोटोहरु को प्रबन्ध गर्न मा रुचि राख्नेहरु को लागी सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हो। यसबाहेक, धेरै प्रयोगकर्ताहरु लाई यसको उल्लेखनीय तस्वीर पोस्ट उत्पादन सुविधा को लागी प्रदान ब्रश र प्रिसेट संगै Lightroom प्रशंसा। यो सबै यो सम्भव पेशेवर novices को लागी पनी सम्पादित तस्वीरहरु प्राप्त गर्न को लागी बनाउँछ।
सफ्टवेयर मूल रूप मा एक स्ट्रीमिंग उपकरण र अनुभवी शूटरहरु को लागी Photoshop को लागी एक अतिरिक्त को रूप मा विकसित गरीएको थियो। तर चाँडै, यो व्यक्तिगत सफ्टवेयर मा परिणत भयो। Lightroom मूल रूप बाट RAW फाइलहरु लाई रूपान्तरण को लागी हो। यसको कार्यहरु क्यामेरा RAW मोड्युल संग मेल खान्छ, तर उपकरण को व्यवस्था फरक छ, र उपकरण को चयन अधिक विविध छ।
मेरो पूरा Lightroom समीक्षा पढ्नुहोस्।
कार्यहरु अनुकूलित हुन सक्छ
धनी सुविधा- र toolset
विभिन्न फाइल प्रकार संग काम गर्दछ
सीमा संग कार्यहरु
GIMP एक इष्टतम खुला स्रोत Photoshop CS5 मुक्त एनालग सबै को लागी जो अझै सम्म उन्नत छवि सम्पादकहरु खरीद गर्न इच्छुक छैन। यो एक आधारभूत स्तर मा संचालन प्रदर्शन को लागी एकदम सही छ, जस्तै चित्रकला, परिष्कृत छविहरु, उपलब्ध विभिन्न ढाँचाहरु संग फाइल रूपान्तरण, अनलाइन ब्याच छवि प्रशोधन।
GIMP विन्डोज, म्याक र लिनक्स जस्ता अपरेटि systems्ग सिस्टमहरु संग मिल्दो छ। यसबाहेक, GIMP व्यापक फाइल ढाँचा को समर्थन गर्दछ: GIF, JPEG, PNG र TIFF।
मेरो पूर्ण GIMP समीक्षा पढ्नुहोस्।
धेरै फाइल ढाँचा को समर्थन
केहि प्रकार्यहरु को कमी
सम्पादन फाइलहरु गुणस्तर हराउन सक्छ
PhotoScape एक सभ्य Photoshop CS5 एक डेस्कटप वा ल्यापटप विन्डोज अपरेटि system सिस्टम मा चलिरहेको ल्यापटप को लागी नि: शुल्क एनालग हो। धेरै नौसिखिया प्रयोगकर्ताहरु को राय मा, यो सफ्टवेयर PS लाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दछ जब यो धेरै डिजिटल फोटो सम्पादन स्थितिहरु को लागी आउँछ। प्रयोगकर्ता ठाउँ बुकमार्क को रूप मा संगठित छ - ती मध्ये प्रत्येक एक विशिष्ट कार्य हल गर्दछ।
आकार र स्टिकर को अतिरिक्त सेट शुल्क को लागी प्रस्ताव गरीएको छ, $ 0.99 प्रति सेट तपाइँलाई मनपर्छ। तपाइँ एक पटक मा सबै सशुल्क सेट किन्न सक्नुहुन्छ र प्रो $ 29.99 को लागी प्रो लाई चिह्नित गर्न को लागी सक्रिय गर्नुहोस्। चाहे यो यसको लायक हो वा होइन व्यक्तिगत आवश्यकताहरु को एक मामला हो।
पूर्ण PhotoScape समीक्षा जाँच गर्नुहोस्।
प्रयोगकर्ता फाइलहरु डाउनलोड वा क्लाउड तिनीहरूलाई बचत गर्न सक्नुहुन्छ
एक क्रोम अनुप्रयोग उपस्थित छ
माउस व्हील मार्फत जुम गर्न सक्षम
विज्ञापन र कीराहरु को उपस्थिति
Pixlr जो एक अनलाइन Photoshop CS5 मुक्त एनालग को लागी खोजी गरीरहेछन् को लागी एक उत्कृष्ट विकल्प हो। दुबै व्यक्तिगत प्रयोगकर्ताहरु र उद्यमहरु यो फ्लैश आधारित प्लेटफर्म को फाइदा बिना केहि लिन सक्छन्-तर स्थिति भविष्य मा परिवर्तन हुन सक्छ। Pixlr केसहरु को लागी एक सही फिट छ जब तपाइँ चाल मा एक छिटो सम्पादन गर्न को लागी आवश्यक छ।
आवेदन प्रयोगकर्ताहरु लाई इन्टरनेट मा जोडिएको हुन को लागी आवश्यक छ - त्यो हो। एउटा तस्वीर सम्पादन सुरु गर्न को लागी, तपाइँ मात्र यो उपकरण बाट अपलोड गर्न को लागी, कुनै पनी अन्य नियमित तस्वीर सम्पादक संग को रूप मा आवश्यक छ। तपाइँ अनलाइन अपलोड फाइलहरु को सुरक्षा को बारे मा चिन्ता गर्नुहुन्न। उनीहरु निजी सेट गरीएको छ, चित्र सम्पादन हेरफेर संग तपाइँ बनाउनुहुन्छ। यसबाहेक, Pixlr फाइलहरु को प्रतिलिपिहरु यसको प्रणाली मा बचत गर्दैन।
Pixlr फोटो सम्पादक बारे मा अधिक पढ्नुहोस्।
UI बुझ्न सजिलो छ
तस्वीरहरु छिटो र कुशलता संग सम्पादन गर्नुहोस्
चित्रहरु संगठित गर्न सक्षम
एक नि: शुल्क दर्ता आवश्यक छ
LightZone व्यावसायिक क्षमताहरु संग एक तस्वीर पोस्ट उत्पादन कार्यक्रम हो। प्रयोगकर्ताहरु लाई यो बाहिर figuring कुनै समस्या छैन र प्रक्रिया मा पूर्ण नियन्त्रण प्राप्त हुनेछ। LightZone को मद्दत संग, यो सम्भव छ छिटो र सजीलो छवि सम्पादन गर्न को लागी र धेरै समायोजन संग फिडल छैन। यसबाहेक, धेरै शूटरहरु लाई LightZone उपयोगी लाग्छ जब यो छविहरु मा जोखिम सही गर्न को लागी आउँछ।
LightZone RAW सहित विभिन्न ढाँचाहरु को छविहरु को यसको गैर विनाशकारी सम्पादन संग आँखा समात्छ। समग्र मा, यो एक महान Photoshop CS5 मुक्त एनालग प्रदान गरिएको परेशानी मुक्त तस्वीर पोस्ट उत्पादन प्रक्रिया को कारण हो।
मेरो पूर्ण Lightzone समीक्षा पढ्नुहोस्।
गुणात्मक कार्यहरु र ओभरले Photoshop CS5 प्रयोगकर्ताहरु बीच उच्च माग मा छन्। यी उपकरणहरु कुशल छवि सम्पादकहरु द्वारा बनाईएको हो र कुनै एक छवि मात्र एक क्लिक मा बढाउन सक्नुहुन्छ। नि: शुल्क कार्यहरु र ओभरले को जाँच गर्नुहोस् कि मैले तल तपाइँको लागी तैयार गरेको छु।
Photoshop CS5 नि: शुल्क डाउनलोड गर्नुहोस्
Photoshop CS5 म्याक/जीत को लागी नि: शुल्क
आईएस / एन्ड्रोइड को लागी Photoshop CS5 नि: शुल्क
यो विश्वसनीय "Adobe Photoshop CS5 मुक्त डाउनलोड" लिंक मा क्लिक गर्नुहोस् र एक कानूनी तरीका मा पीसी को लागी कार्यक्रम प्राप्त गर्नुहोस्। यो एक फरक पर्दैन यदि तपाइँ एक अनुभवी प्रयोगकर्ता वा एक कुल नौसिखिया हुनुहुन्छ, तपाइँ यो कार्यक्रम को एक ह्या hang्ग प्राप्त गर्न र एक पेशेवर स्तर मा बनाईएको सम्पादन उत्पादन गर्न निश्चित हुनुहुन्छ।
फोटोशप CS5 लाभ
Mac लागि Photoshop
Photoshop Elements: शुल्क डाउनलोड